Bệnh Phấn Trắng và 14 Cách Phòng Điều Trị Hiệu Quả | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Bệnh Phấn Trắng và 14 Cách Phòng Điều Trị Hiệu Quả | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Bệnh Phấn Trắng và 14 Cách Phòng Điều Trị Hiệu Quả | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Isifo sokungunda kuyingozi kakhulu ekukhuleni nasekukhuleni kwezityalo, ngakumbi iicucurbits (ithanga, izucchini, cucumber, ivatala ekrakra,…), iirozi, irabha, iziqhamo zothando, isipinatshi…
Esi sifo sinzima kakhulu kwimithi emincinci entwasahlobo ngenxa yomswakama ophezulu, ukuba akukho zifo ezithile zokunyanga nokukhusela ngexesha, kuya kuchaphazela isivuno sesityalo sonke.
Kweli nqaku, iFoo Vietnam iya kusebenza nabafundi ukufumana iinkcukacha Yintoni ukungunda?iimpawu, amanyathelo okukhusela kunye nonyango oluthile lwesi zinambuzane.
1 Yintoni ukungunda?
2 Iimpawu ze powdery mildew
2.1 I-Powdery mildew kwi roses
2.2 I-Powdery mildew kwimithi yerabha
2.3 I-Powdery mildew kwi-cucurbits
2.4 Passion fruit powdery mildew
3 Amanyathelo okuthintela nokoyisa i powdery mildew
4 Iyeza lokungunda
Itshokhwe emhlophe yingundo ekhethekileyo ye-ectoparasite ene-mycelium encanyathiselwe kumacala omabini egqabi (umphezulu ongaphezulu uxinene), zenza umbhobho ongena nzulu kwiseli ukufunxa izondlo.
Esi sifo sisasazeka ngokukhawuleza yi-meiosis yesisu ngomoya kunye nomoya, kwiqondo lokushisa lama-20-24 degrees Celsius kunye nokufuma komoya ophezulu yimeko yokuba isisu sihlume ngokukhawuleza.
Esi sifo sikho njengesifunxi-gazi esisinyanzelo unyaka wonke kusapho lwe-cucurbit, ezinye izityalo kunye nezityalo zasendle.
Esi sifo sisasazeka ngokudibana phakathi kwezityalo ezinesifo kunye nezityalo eziphilileyo, yimvula, umoya nomoya.
Kuzo zonke iimeko zobushushu, esi sifo sinokukhula ukuba nje kukho ukufuma okwaneleyo ukuze isisu sefungus sikhule, ngoko ayifuni mvula, inkungu nje okanye ukufuma okufanelekileyo kwanele ukuba isifo sikhule.
Iimpawu ze powdery mildew
Kanye ukususela ngexesha lesaplings isifo sokungunda kwavela, ekuqaleni amaqoqo nje amancinci aphulukene nombala wabo oluhlaza ukuya tyheli, ke iblade yegqabi yagqunywa ngokuthe ngcembe ngamaleko ashinyeneyo womngundo omhlophe, nakwimithambo yegqabi. Amagqabi awosulelekileyo alahlekelwa ngumbala oluhlaza, ajike abe tyheli, ome kwaye atshise lula.
Esi sifo sibonakala kuzo zombini izikhondo, amasebe, amagqabi, iintyatyambo neziqhamo, nto leyo ebangela ukukhula okudodobalayo kunye nesivuno esiphantsi. Nangona esi sifo sibangela umonakalo onamandla kwiimeko zokufuma okuphezulu, isisu somngundo sisasazeka ngamandla kwiimeko ezomileyo.
Esi sifo sikho nakwimbewu yezityalo ezigulayo, ezisasazwa ngumoya, ngoko ke abalimi kufuneka balumke kakhulu xa bekhetha iintlobo.
I-Powdery mildew kwi roses
Ibonakala njengomgubo ongwevu-mhlophe kunye nokumila okungapheliyo phezulu, amahlumela amancinci, amacala omabini amagqabi. Kwiimeko ezimandundu, kwisiqu, amasebe, amagqabi kunye neentyatyambo, kubangela ukukhula okucothayo kweerozi, amagqabi akhubazekileyo, izikhondo ezomileyo ezimile, iintyatyambo zingadumi, amathupha ambalwa kwaye zinokubangela ukufa kwezityalo.
Xa uhlushwa yi-fungus emhlophe, amaqabunga e-rose abonisa iimpawu zokuncipha, ukoma, ukungabi namandla, njenge-hemorrhoids, kodwa kunye ne-layer eyongezelelweyo yomgubo omhlophe.
I-Powdery mildew kwimithi yerabha
Ukususela ngoJanuwari ukuya kuMatshi minyaka le, ubushushu busuka ku 20-25 degrees celcius, kukho inkungu xa umgubo we powdery ubonakala kakhulu kwimithi yerabha.
Kwinqanaba lokuqala, amagqabi awosulelekileyo amdaka kunye nohlaza olukhanyayo, amagqabi amatsha achaphazeleke kakhulu angawa, amagqabi angawiyo avela kwimizila yesifo, uhlobo olumdaka olunombala.
Emva kweentsuku ezi-6 ukuya kwezi-10 zesifo, i-powder emhlophe ibonakala kumacala omabini, amaqabunga awela, amaqabunga asele, ngokuthe ngcembe ama-stalk nawo awela. Amagqabi angawiyo akhubazeke kwaye ajike abe tyheli.
I-Powdery mildew kwi-cucurbits
Isifo sivela ekukhuleni okuphakathi kunye nasekupheleni kwezityalo ze-melon kwiimeko zokufuma okuphezulu, okupholileyo kunye nokukhanya kwelanga okuncinci. Ikakhulu ibonakala kumagqabi, inokusasazeka kuzo zombini isiqu kunye ne-petiole.
Ekuqaleni amabala amancinci aluhlaza-greyish, emva koko akhule ngaphandle kwemilo ethile, ekuqaleni kukho umgubo omhlophe phezu komphezulu wesifo, emva koko ujika ube grey kunye nembewu encinci emnyama ebangela ukuphuzi, ukomisa kunye nokulahleka kweqabunga.
Passion fruit powdery mildew
Kwiziqhamo zothando, kuxhomekeke kwinqanaba lophuhliso, eso sifo sinemibonakaliso eyahlukileyo yangaphandle.
Xa umthi usemncinci (okwaziwa njenge lime encinci), amagqabi ajikekile kwaye akhubazekile, amathupha e-apical awaphuhli.
Ukuba eli nqanaba alibonwa kwangethuba kwaye linyangwe ngokukhawuleza, isiqhamo siya kuba gwenxa, siqine, singagudi, sibe namaqhuma, sibe namathumba amancinci kwaye kuvele amachokoza amaninzi amhlophe.
Isiqhamo sePassion sinesifo sokungunda kunye nentsholongwane ngaphandle konyango
Amanyathelo okuthintela nokoyisa i powdery mildew
Xa ifunyenwe isifo sokungundakufuneka uthathele ingqalelo ukwenza ezi zinto zilandelayo ngoko nangoko (zinokusetyenziswa ekubeni ungaguli):
Hlanza amasimi kunye neegadi, qokelela amagqabi agulayo uwatshabalalise kude.
Phakamisa isiseko somthi, uphakamise kwibhedi ephezulu, ukhuphe amanzi kwintsimi, injongo kukunciphisa umswakama ukunciphisa ukuphuhliswa kweentsholongwane.
Ukusebenzisa i-mulch yomhlaba sisisombululo esisebenzayo kakhulu.
Uxinaniso lwemithi olufanelekileyo akufunekanga lube ngqindilili kakhulu kuba iipathogens kulula ukusasazeka kwaye zibe mandundu.
Coca amasimi kunye nezitiya emva kokuvuna, ukuphucula umhlaba, ukuphelisa iintsholongwane.
Khetha iintlobo ezilungileyo, ezisempilweni ezinokumelana nezifo.
Nanga amanye amachiza asetyenziswayo unyango lokungunda ukuba iFao Vietnam icebisa kwireferensi yakho.
Qaphela: Amachiza asetyenziselwa ukunyanga izifo ezininzi, kodwa sikhankanya kuphela ukusetyenziswa kwe-powdery mildew kwisityalo ngasinye esithile:
1. Inqaku le-250EC
Ukubunjwa kweziyobisi yi-Difenoconazole 250g / l kwifom yolwelo. Indlela yokusebenza kukuthintela ukuhlanganiswa kwe-Ergosterol eyona nxalenye yesakhiwo senwebu yeseli yefungal.
Ichiza lingena ngokunzulu, likhupha ngamandla kwisiqu, amagqabi, njl njl ukukhuhla kunye nokutshabalalisa izifo zefungal. Ngenxa yomthamo owomeleleyo wokukhupha amanzi, inqandelwe ukuba ikhukuliswe yimvula emva kweeyure ezimbalwa zokutshiza.
Umthamo wokutshiza ukusuka kwi-300-500 yeelitha ngehektare ngokulinganayo emagqabini.
Kwizityalo zokuhombisa: Idosi ye-0.2-0.5 ilitha yeyeza/ha, isantya se-15ml/imbiza yeelitha ezingama-25, fafaza iibhotile ezi-2/1000m2 okanye umlinganiselo we-100-120ml/200 yelitha zamanzi, fafaza iilitha ezingama-500/ha.
Icuba: Ithamo 0.25-0.3 ilitha iyeza/ha, ireyithi ye-10ml/ibhotile yeelitha eziyi-16, fafaza iibhotile ezi-3/1000m2 okanye ireyithi ye-15ml/ijari iilitha ezingama-25, fafaza iibhotile ezi-2/1000m2.
Kwimithi yeziqhamo efana nomdiliya, ama-apile, iimango,..: Ithamo le-0.2-0.5 litre/ha, izinga le-4-10ml/ingqayi yeelitha ezi-8, fafaza iilitha ezingama-300-500 zamanzi ngehektare nganye.
Qaphela: Inqaku le-250EC liqela le-III ityhefu, engeyotyhefu kwiinyosi, iintaka, imisundululu kodwa iyityhefu kwintlanzi, kwizityalo nakwizilwanyana zasemanzini, i-LD 50 (ngomlomo wempuku) > 1,450 mg/kg, LD 50 (nge-inhalation) kwiimpuku. ) > 3,300 mg / m3 – kwiiyure ze-4.
2. I-Aliette 800WG
Amayeza anezithako ezisebenzayo iFosetyl Aluminium 800g/kg epakishwe kwi-100g yonyango olulodwa. isifo sokungunda kwiivatala Ngomatshini wokuvuselela izityalo ezichasene nebhaktheriya, zitshizwe kanye ngaphambi kokuba isifo sivele, eli kuphela kweyeza elinokukhutshwa kwe-2-way.
Kwizityalo zevatala, xuba i-20g yechiza kunye neelitha ezi-8 zamanzi kwaye utshize iilitha ezingama-500-600 zamanzi ngehektare nje ukuba sivele isifo.
Qaphela: ixesha lokuzihlukanisa leentsuku ezili-14, musa ukudibanisa nesulfure, iziyobisi ezisekelwe kubhedu, izichumisi ze-nitrogen. Kunokwenzeka ukuba usebenzise ezinye iziyobisi ezinezithako ezisebenzayo ezifana ne-Alpine 80WDG, i-Forliet 80WP, njl.
3. Nativo 750WG
Amayeza ane-Trifloxystrobin 250g/kg kunye neTebuconazole 500g/kg kunyango i-powdery mildew kwi roses Inceda iintyatyambo zihlale zintsha ixesha elide kwaye zigcine umbala wazo.
Ukongeza, ichiza likwaphatha nezinye izifo ezininzi ezifana nomhlwa, i-anthracnose, indawo yamagqabi. Isiphumo sizinzile nakwixesha lemvula.
Ukusebenzisa: Kwizityalo zerozi, xuba i-6g yeyeza kunye ne-16 ilitha zamanzi. Tfutha iibhotile ezi-2 nge-1000m2.
4. Daconil 75WP
Ichiza liqulethe isithako iChlorothalonil 75%, 500g ukucaciswa, ngokukodwa kunyango lwezifo ezifana ne powdery mildew, anthracnose, indawo yamagqabi, ukuwa kwemithi emincinci, imivimbo eyomileyo, ukuqhuma.
Ukusebenzisa: Xuba i-15gr yeziyobisi kunye neelitha ezili-10 zamanzi, i-edema ukusuka kwi-400-500 ilitha ngehektare.
Qaphela: Emva kokutshiza ngaphezulu kweentsuku ezisi-7 ukuze kuvunwe.
5. Kumulus 80DF
Ichiza liqukethe izithako zeSulfur 800gr / kg kunye nefuthe lokuthintela izifo zefungal, kuba icandelo leSulfure linempahla ye-antiseptic, ngoko inokubulala izigcawu.
Ukusebenzisa: Kwimithi yemango ekwinqanaba lokuqhama, xuba i-60g kunye ne-16 yeelitha zamanzi, fafaza iilitha ezingama-600-800 ngehektare nganye. Ukuba yimango engapheliyo enobubanzi obubanzi kunye nomthi omde, fafaza iilitha eziyi-1000 ngehektare nganye.
6. Intshatsheli 57.6DP
Isithako esiphambili yi-Copper hydroxide 576g / kg, kufuneka ubeke ingqalelo ukuthenga iyeza elifanelekileyo kunye nesi sithako.
Inefuthe elihamba ngokukhawuleza, lidibana nazo zonke iindawo zesityalo ukuthintela ukukhula kwentsholongwane, esebenza kakhulu kwimidiliya. Inokuxutywa nezinye izitshabalalisi kunye nezifo ukunciphisa umsebenzi wokutshiza.
Ukusebenzisa: Kwimivini, xuba i-10-15 gr yechiza kunye ne-8-litre yetanki yamanzi, fafaza i-400-1000 ilitha ngehektare ngokuxhomekeke kubunzima besifo. Kwisifo esibi kakhulu, phinda utshize emva kweentsuku ezi-7 ukuya kwezi-10, ixesha lokuhlukaniswa kweentsuku ezi-7.
7. I-Overamis 300SC
Esona sithako siphambili yiAzoxytrobin 300g/litre, Unyango lwe-powdery mildew kwiirosesiichrysanthemums, iitumato, isitrasi kunye nerabha.
Ukusebenzisa: Umthamo ukusuka kwi-0.2-0.3 iilitha zamayeza / ihektare, izinga le-10-15ml / ijare ye-20 ilitha zamanzi, ukutshiza ukusuka kwi-400-600 ilitha / ihektare xa kuvela izifo ezitsha. Ixesha lokuzihlukanisa ziintsuku ezili-15.
8. Aviso 350SC
Unyango lwe-powdery mildew isifo kwi-roses kunye ne-rubber ene-2 ​​components Azoxystrobin 200g / l kunye ne-Difenoconazole 150g / l.
Ichiza likwaphatha nezinye izifo ezinje ngokuqhushumba kwerayisi, ukudumba kwerayisi okuziinkozo, ukubola okomileyo, ukutyheli kwamagqabi kwangaphambi kwexesha, i-anthracnose, i-powdery mildew, indawo yendandatho, umhlwa, ukufa kwesityalo esincinci, indawo yamagqabi. I-Azoxystrobin nayo inepropati ebalulekileyo yamagqabi aluhlaza ngokukhawuleza.
Ukusebenzisa: Kuba umgubo omhlophe kwimithi yerabha Sebenzisa i-12.5ml yechiza elixutywe neelitha ezili-10 zamanzi, utshize iilitha ezingama-400/ha ngokulinganayo kwizityalo xa izinga lesifo liku-10%.
Gcina kude nokufikelela kubantwana, gcina kwindawo ekhuselekileyo, ungabelani nokutya, ukutya kwezilwanyana.
Khusela umzimba xa utshiza, ungatyi, usele, utshaye xa utshiza.
Emva kokusetyenziswa, kufuneka uhlambe kwaye utshintshe iimpahla.
Musa ukuhlamba izixhobo zokutshiza kumachibi eentlanzi kunye namachibi, imithombo yamanzi asekhaya.
Lahla ukupakishwa kweziyobisi kwindawo efanelekileyo kwaye ngokwemigaqo.
Inokuxutywa nezinye izitshabalalisi, kodwa kufuneka iphephe i-alkaline okanye i-asidi kakhulu.
Ungabhekisela kwezinye iziyobisi ezifana Mekomil Gold, Avtvil 5SC, Dong Nano, Map super 300, Bellkute 40 WP, Saprol 190DC, Anvil, Topsin, ECAmistar top 325SC, soy bean intlama for roses, amalungiselelo EM2, microbial organic fertilizer HVP 30B umlinganiselo we 1:10 …
Rỉ sắt | Hatgiongtihon.net